Air Couplers Factory, Suppliers |China Air Couplers Abavelisi
Iplagi yeSimbo soShishino loMoya
● Indlela yoshishinoAir Coupler Plugyenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Ufakelo lwethu luyatshintsheka kunye nee couplers ezifanayo zenziwe kumgangatho ofanayo.
● Ezi ingono zomoya zihambelana ne-Mil spec MIL-C-4109F kunye ne-ISO6150-B.
● Ukusetyenziswa kwiicompressors zomoya, izixhobo zomoya, iintambo zomoya njl.
● Ubungakanani bomzimba bubandakanya 1/4, 3/8 & 1/2.
● Max.uxinzelelo lomoya: 300 PSI
● Max.ubushushu obusebenzayo bethuAir Coupler Plugukuya kuthi ga kwi120℃ okanye 250℉
ISimbo soShishino loMoya izibini
● Ezi ntlobo zemizi-mvelisoQuick Connect Air Couplingsyenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Iibheringi zebhola ezi-6 zinika ukubamba okungcono xa ukudibanisa kunye nokulinda umkhono kuthintela ukuqhawula ngengozi.
● Indlela yevalve ye-tubular ikhuthaza ukuhamba komoya okuphezulu.
● Ufakelo lwethu luyatshintshatshintsha ngeeplagi ezifanayo ezenziwe kumgangatho ofanayo.
● Ezi zimbini zomoya zihambelana ne-Mil spec MIL-C-4109F kunye ne-ISO6150-B.
● Max.uxinzelelo lomoya: 300 PSI.
● Max.ubushushu obusebenzayo bethuQuick Connect Air Couplingsukuya kuthi ga kwi120℃ okanye 250℉.
Isimbo seTru-Flate / iPlug ye-Automotive Air Coupler
● Isimbo seTru-FlateAir Coupler Plug, edla ngokubizwa ngokuba kukutshintshiselana kweemoto, yenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Ukufakwa kwicompressor zomoya, izixhobo zomoya, amanzi, igrisi, ipeyinti njl.njl.
● Ubungakanani bomzimba bubandakanya i-1/4 kunye ne-3/8
Isimbo seTru-Flate / i-Automotive Air Coupler
● Isimbo seTru-Flate okanyeAutomotive Air Coupleryenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Ubungakanani bomzimba bubandakanya 1/4 & 3/8.
● Max.ubushushu obusebenzayo bethuAutomotive Air Couplerukuya kuthi ga kwi120℃ okanye 250℉
● I-ARO okanye isimbo se-AAir Coupler Plugyenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Max.ubushushu obusebenzayo: -40 ° ~ +120 ° C / -40 ° ~ +250 ° F
● I-ARO yethuAir Coupler Plugikwafumaneka kwintsimbi yentsimbi ene-zinc plated ebonisa ukuchasana nokugqwala okuphezulu kunye nobomi benkonzo ende.
● IARO Coupler or A Style Coupleryenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Iibheringi zebhola zinika ukubamba ngcono xa uqhagamshelo kunye nesigada semikhono sithintela ukuqhawulwa ngengozi.
● EyethuARO Couplerkwintsimbi yezinto eziphathekayo nayo iyafumaneka ngesicelo.Intsimbi ye-A Style Coupler ene-zinc plated features i-corrosion resistance and life long service.
Iplagi yeSimbo sikaLincoln soMoya weCoupler
● Isimbo sikaLincoln okanye sikaL sokutshintshiselana ngeempumlo ezindeAir Coupler Plugyenziwe ngentsimbi eqinileyo.
● Isimbo sikaLincoln sofakela umoya sisiphelo sendoda seseti yokudibanisa, ekwabizwa ngokuba ziiplagi zokudibanisa umoya ezikhawulezayo okanye iingono.Zifakwe kwi-Lincoln air coupler body (iziphelo zabasetyhini) ukudibanisa izixhobo ze-pneumatic.Intsimbi inzima kwaye iyakwazi ukumelana nomonakalo ngaphezu kweentsimbi ezithambileyo kunye noluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo, kwaye i-Zinc-plated finish inika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion.
● Isifakelo somoya sesimbo sikaLincoln sinokutshintshwa kunye noluhlu olude lwe-Lincoln Interchange.
● Ifakelwa izicinezeli zomoya, izixhobo zomoya kunye nokusetyenziswa kuphela kwindawo yokusebenzela yomoya.
● Uhlobo lokudibanisa: Intambo yendoda ye-NPT, intambo yowesifazane we-NPT.
● Isimbo sethu sikaLincolnAir Coupler Plugiyafumaneka nakwi-material bras xa uyicela.
Lincoln Isimbo soMoya Coupler
● Isimbo se-Lincoln okanye se-L sempumlo ende yotshintshiselwano lwe-air coupler senziwe ngobhedu oluqinileyo ukuze luzinze ngcono.
● Lincoln Air Couplersisiphelo sowasetyhini seseti zokudityaniswa, ekwabizwa ngokuba yi- quick-connect air coupling okanye icompressed air coupling.Zidityaniswe neeplagi zomoya zeLincoln (iziphelo zamadoda) ukudibanisa izixhobo zomoya.ULincoln Air Couplerkwizinto zentsimbi ziyafumaneka.Intsimbi inzima kwaye iyakwazi ukumelana nomonakalo ngaphezu kweentsimbi ezithambileyo kunye noluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo, kwaye i-Zinc-plated finish inika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion.
● IULincoln Air Coupleriyatshintsheka kunye noluhlu olude lwe-Lincoln Interchange.
I-Universal Air Coupler-Ishishini, i-Automotive, i-ARO
● IUniversal Air Coupleryenziwe ngobhedu oluluqilima ukuze lomelele ngakumbi.
● Yamkela iintlobo ezintathu zeengono: I-Industrial Interchange, i-Automotive / style ye-Tru-Flate kunye nesitayela se-ARO.
● IUniversal Air CouplerIvumela uthotho lweengono ezininzi ukuba zidibane ne-coupler enye.
● I-universal air fitting in steel material iyafumaneka.Intsimbi inzima kwaye iyakwazi ukumelana nomonakalo ngaphezu kweentsimbi ezithambileyo kunye noluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo, kwaye i-Zinc-plated finish inika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion.
I-Universal Coupler eKhawulezayo-Imizi-mveliso, i-High Flow / yaseYurophu, i-ARO
● Ukuhamba okuphezuluUniversal Quick Coupleryenziwe ngobhedu oluqinileyo, olunokuqina okungcono.
● Yamkela iintlobo ezintathu zeengono: I-Industrial Interchange, i-High Flow / V style okanye isitayela saseYurophu kunye nesitayela se-ARO.
● Ukuhamba okuphezuluUniversal Quick Couplerivumela uthotho lweengono ezininzi ukuba zihlangane ne coupler enye.
● I-universal air fitting in steel material iyafumaneka.Intsimbi iqinile, kwaye inokumelana nomonakalo ophezulu kunye noluhlu olubanzi lobushushu bokusebenza kunezintsimbi ezithambileyo.Umphezulu we-galvanized unika ukuxhathisa okuphezulu kokubola.
● Ukuhamba okuphezulu okanye isimbo se-VAir Coupler Pluginendawo yokuqukuqela ephinda-phindwe kabini kuneendawo eziqhelekileyo zokutshintshana kwamashishini.Ukuhamba okwandisiweyo kubangela ukusebenza kakuhle kwesixhobo kunye nokuncipha kweendleko zomoya.Iingono zenziwe ngobhedu oluqinileyo ukuze luzinze ngcono, kwaye izinto zentsimbi ziyafumaneka.Intsimbi inzima kwaye iyakwazi ukumelana nomonakalo ngaphezu kweentsimbi ezithambileyo kunye noluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo, kwaye i-Zinc-plated finish inika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion.
● Izifakelo zombhobho womoya ohamba kakhulu zisiphelo sendoda seseti ezidibanisayo, ezikwabizwa ngokuba ziiplagi zokudibanisa umoya ezikhawulezayo okanye iingono.Zifakwe kwi-V style coupler body body (iziphelo zabasetyhini) ukudibanisa izixhobo zomoya.
● Ukuhamba okuphezulu okanye isimbo se-VAir Coupler Plugiyatshintsheka kunye neJamani style ukudibanisa DN7.2 - 7.8, Cejn 320, Legris 25/26, Norgren 234/238, Rectus 25/26, Schrader InterCheck 35.
● 1/4 & 3/8 ubungakanani bokuqukuqela okusisiseko
● Uhlobo lokudibanisa: Intambo yendoda ye-NPT, intambo ye-NPT yowesifazane kunye ne-hose barb.